Unknown Soldier (2017) | MM Movie Store
Hacksaw Ridge နောကျပိုငျး စဈကားကောငျးတှေ မထှကျတာတော့ စဈကားကွိုကျပရိတျသတျတှအေတှကျ ဝမျးနညျးစရာပါပဲ..
သို့ပမေယျ့ ဝမျးသာစရာကောငျးတာ က ဒီဇာတျကားဟာ စဈကားကောငျးစာရငျးထဲပါသလို အကောငျးဆုံးမငျးသားဆု၊တညျးဖွတျဆု၊အသံတညျးဖွတျဆုနဲ့ မိတျကပျဆုလညျးရခဲ့တဲ့အပွငျ အခွားဆု(၆)ဆုလညျးဆနျကာတငျစာရငျးထဲဝငျခဲ့ပါတယျ….ဖငျလနျနိုငျငံရဲ့နာမညျကွီးအရောငျးရဆုံးဝတ်တုကို အခွခေံပွီးရိုကျကူးထားတဲ့ဇာတျလမျးကောငျးလေးဖွဈပါတယျ…..
ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ ၁၉၄၁ ဂြှနျလလောကျတှငျ ဖငျလနျနိုငျငံဟာ နာဇီဂြာမနျနဲ့မဟာမိတျဖှဲ့ခဲ့ရတယျ..ဒုတိယ ကမ်ဘာစဈအတှငျးမှာ ရုရှားဆိုဗီယကျတို့ရဲ့ နယျမွသေိမျးတိုကျခိုကျမှုတှနေဲ့ အပွငျးအထနျကွုံတှခေဲ့ကွရတယျ..
၁၉၃၉ခုနှဈတုနျးက ဆောငျးတှငျးတိုကျပှဲမှာဆုံးရှုံးသှားတဲ့ ကာရီးလီးယားနယျမွကေို ရုရှားတို့ဟာ ပွနျလညျသိမျးပိုကျဖို့အတှကျခြီတကျခဲ့ကွပွီးတိုကျပှဲအကွီးအကယျြဖွဈခဲ့ပါတယျ…စဈပှဲကာလ အတောအတှငျးမှာ ဖငျလနျရဲဘျောတှေ စဈပှဲနဲ့ပတျသကျပွီး ဖွဈပကျြမှုတှကေိုအဓိကထားပွီးရိုကျကူးထားတာပါ…
ဒီကားက ပေးခငျြတဲ့ Message လေးတှအေရမျးကောငျးတယျ…ဇာတျကားက စဆုံးကို တိုကျပှဲတှပွေညျ့နှကျလို့နပေါတယျ…..စဈကားကွိုကျသူတှအေတှကျ ကွညျ့သငျ့တဲ့ကားကောငျးတဈကားလို့ ညှနျးဆိုပါရစေ….
Hacksaw Ridge နောက်ပိုင်း စစ်ကားကောင်းတွေ မထွက်တာတော့ စစ်ကားကြိုက်ပရိတ်သတ်တွေအတွက် ဝမ်းနည်းစရာပါပဲ..
သို့ပေမယ့် ဝမ်းသာစရာကောင်းတာ က ဒီဇာတ်ကားဟာ စစ်ကားကောင်းစာရင်းထဲပါသလို အကောင်းဆုံးမင်းသားဆု၊တည်းဖြတ်ဆု၊အသံတည်းဖြတ်ဆုနဲ့ မိတ်ကပ်ဆုလည်းရခဲ့တဲ့အပြင် အခြားဆု(၆)ဆုလည်းဆန်ကာတင်စာရင်းထဲဝင်ခဲ့ပါတယ်….ဖင်လန်နိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးအရောင်းရဆုံးဝတ္တုကို အခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်…..
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ၁၉၄၁ ဂျွန်လလောက်တွင် ဖင်လန်နိုင်ငံဟာ နာဇီဂျာမန်နဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ခဲ့ရတယ်..ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာ ရုရှားဆိုဗီယက်တို့ရဲ့ နယ်မြေသိမ်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ အပြင်းအထန်ကြုံတွေ့ခဲ့ကြရတယ်..
၁၉၃၉ခုနှစ်တုန်းက ဆောင်းတွင်းတိုက်ပွဲမှာဆုံးရှုံးသွားတဲ့ ကာရီးလီးယားနယ်မြေကို ရုရှားတို့ဟာ ပြန်လည်သိမ်းပိုက်ဖို့အတွက်ချီတက်ခဲ့ကြပြီးတိုက်ပွဲအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်…စစ်ပွဲကာလ အတောအတွင်းမှာ ဖင်လန်ရဲဘော်တွေ စစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်ပျက်မှုတွေကိုအဓိကထားပြီးရိုက်ကူးထားတာပါ…
ဒီကားက ပေးချင်တဲ့ Message လေးတွေအရမ်းကောင်းတယ်…ဇာတ်ကားက စဆုံးကို တိုက်ပွဲတွေပြည့်နှက်လို့နေပါတယ်…..စစ်ကားကြိုက်သူတွေအတွက် ကြည့်သင့်တဲ့ကားကောင်းတစ်ကားလို့ ညွှန်းဆိုပါရစေ….
[James Bond] The Living Daylights (1987)